Dagaallada Puntland iyo Galmudug oo Gaalkacyo Ka Barakiciyey Shacab Gaadhaya 40 Kun oo Qoys | Saxil News Network
Dagaallada Puntland iyo Galmudug oo Gaalkacyo Ka Barakiciyey Shacab Gaadhaya 40 Kun oo Qoys
New York(Saxilnews.com)- Hay’adda Qaramadda Midoobay u qaabbilsan isku-xidhka arrimaha gargaarka ee OCHA, ayaa shaacisay in dagaallada u dhexeeya Ciidammada Maamullada Puntland iyo Galmudug magaalada Gaalkacyo ee xarunta Mudug ka barakiciyeen Guryahoodii Shacab lagu qiyaasay illaa afartan kun oo qoys.
Hay’adda OCHA oo Warbixintan shalay soo saartay, ayaa sheegtay inay xogtan ka heleen Ururrada Maxalliga ah ee ka hawlgala magaalada Gaalkacayo, ee iska horimaadyadu ka dhaceen, sida Afhayeenka Qaramada Midoobay ku shaaciyey Warbixinnadiisa maalinlaha ah.
“Dad ka badan 30 qof ayaa lagu qiyaasay inay ku dhinteen dagaallada ka dhacay magaalada Gaalkacyo.” Sidaa ayuu yidhi Afhayeenka Qaramada Midoobay. Waxaanu intaas ku ladhay; “Ururrada Maxalligu waxay u fidinayaan gargaar deg-deg ah, Biyo iyo gargaarka fayo-dhawrka.”
Iska horimaadka labada dhinac oo bilaabmay toddobaadkii hore, ayaa keenay in badi Shacabkii magaalada Gaalkacyo ku dhaqnaa ka barakaceen Guryahoodii, si ay xabbadaha dhacaya uga fogaadaan. “Hay’adaha Qaramada Midoobay iyo kuwa caalamiga ah, ayaa si ku-meel-gaadh ah uga baxay magaalada dagaallada awgood. Taasi waxay abuurtay hakad ku yimi adeeggii ay u fidin jireen bulshada magaalooyinka Mudug, Galguduud iyo gobolka Hiiraan.” Sidaa ayuu yidhi Mr. Dujarric.
Hay’ada OCHA, ayaa ka digaysa in weli baahi gargaar bani-aadminnimo ka jiraan Soomaaliya, oo dad lagu qiyaasay illaa 4.9 Milyan u baahn yihiin, ayuu raaciyey Afhayeenku, hadalkiisa, isagoo sheegay in dadkan cusub ee dagaallada Gaalkacyo ku dhex-maray Maamullada Galmudug iyo Puntland u baahan yihiin gargaar dhinacyada quudinta, caafimaadka iyo biyo nadiif ah inay si dhaqso ah u helaan.